Friday April 17, 2020 - 14:21:01 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warbixinta AFRICOM oo lagu laray Muuqaal ilbiriqsiyo kooban ladaawan karo oo ay duubtay diyaarad Drone ah ayaa ahaa isku daygii ugu weynaa ee taliska Mareykanka uu ku daboolayay gummaadka uu ugeysanayo shacabka rayidka ah ee ku dhaqan Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Suldaan Cabaas Muxamed oo ahaa Suldaankii beesha Jareerweyne ee Jubbooyink ayay diyaarad Drone ah Jimcihii lasoo dhaafay 10,April 2020 ku duqeysay meel 60 Km ujirta degmada Jamaame.
AFRICOM waxay ku andacootay in Suldaanku uu xaadiray goob lagusoo bandhigayay meydad ciidamada dowladda looga dilay deegaanka Baar Sanguuni.
ilo wareedyo deegaanka ah iyo baaritaanno ay sameysay SomaliMeMo ayaa xaqiijinaya in Suldaan Cabaas lagu duqeeyay meel udhow degmada Kamsuuma waxaana waxba kama jiraan sheegashada Mareykanka ee ah in uu ahaa sarkaal Al Shabaab ah oo soo agaasimay munaasabaddii Meydadka lagusoo bandhigayay.
Warbixinta AFRICOM ka timid waxaa ka muuqday isbarbar yaac iyo in Mareykanku ka gubanayo soo bandhigidda gummaadka uu ugeysanayo dadka rayidka ah isagoo marmarsiiyo ka dhiganayo ladagaallanka 'Argagaxisada'.
Taliska AFRICOM illaa iyo hadda wax war ah kamasoo saarin shacabkii uu ku xasuuqay Jilib,Buula Fuulaay,Janaale iyo Kuunyo Barroow wuxuuna umuuqdaa mid diiddan in uu rumeeyo ama beeniyo sawirrada warbaahintu soo bandhigtay ee muujinaya khasaaraha baaxadda leh ee uu shacabka ugeystay.
SOMALMEMO XIRIIR MIYAY LALEEDAHAY AL SHABAAB?.
Intii lagu guda jiray qoraalka kasoo baxay Taliska ciidanka Mareykanka qaaradda Afrika ayaa lagu dhax sheegay in warbaahin ay ka mid tahay SomaliMeMo ay buun buuniyaan khasaaraha dadka shacabka kasoo gaaraya duqeymaha USA ee Soomaaliya.
"mid ka mid ah warbaahinta sheegeysa wararka beenta ah ee ah in shacab la dilay waa SomaliMeMo oo xiriir la leh Alshabaab" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay AFRICOM.
Hadaba maamulka Shabakadda SomaliMeMo wuxuu markale bulshada Soomaaliyeed iyo saxafiyiinta xurta ah u xaqiijinayaa in uusan jirin haba yaraatee wax xiriir ah oo shabakadda kala dhaxeeya dhaq dhaqaaqa hubaysan ee Al Shabaab.
SomaliMeMo oo shaqeynaysa muddo 11 sanadood ah ayaa si siman usoo tabisay wararka Soomaaliya, waa dhab in shabakaddu ay diiradda saarto wararka halganka ka socda dalka ayna kasoo horjeeddo shisheeyaha gummeysiga ku haya umadda Soomaaliyeed.
Sida dhaqanka u ah Mareykanka iyo xulufadiisa Soomaalida ah cid walba oo xaqiiqda kasoo tabisa dalka waxay ku riixaan dhanka waxa ay ugu yeeraan Argagaxisada, SomaliMeMo oo ay aas aaseen aqoonyahanno ku sugan gudaha dalka iyo dibaddiisa waxay marwalba u taagantahay in ay sare uqaaddo dhibanayaasha aan codkoodu meel dheer gaarsiisnayn.
"eedda ka timid AFRICOM ee warbaahinta SomaliMeMo uu laxiriiriyay Al Shabaab waa been aan sal iyo raad laheyn taasina naga reebi doonto in aan baahinno xaqiiqda dadka ladhiban duqeymaha diyaaradaha Drone-ka" ayaa lagu yiri war kasoo baxay maamulka shabakadda.
SomaliMeMo waxay inta badan gobollada dalka Soomaaliya ku leedahay wariyaal madax banaan oo si mihnadeeda usoo dira wararka xaqiiqda ah marmarka qaar shabakaddu waxay warar ka heshaa saraakiil Xarakada katirsan wararkaas oo ku dhaca wakiil wareedyadeena gudaha dalka ku sugan taasina kama dhigna in aan taabacsanahay Al Shabaab.
Ugu dambeyn Wariyaasha xurta ah waxaan ku guubaabinaynaa in ay diirada saaraan duqeymaha diyaaradaha Mareykanka ay ka geysanayaan Koonfurta Soomaaliya kuwaas oo badanaa lagu waxyeeleeyo dad shacab ah oo aan wax lug ah ku laheyn loollanka dalka ka jira.
Xarakada Al Shabaab waxay leedahay warbaahinta si rasmi ah oo Afkeeda ugu hadasha waana lawada yaqaan oo waa Alkata'ib iyo Radio Andalus halkaas ayaana loo doontaa wararka xarakada ku saabsan laakin Somalimemo ma ahan warbaahin la shaqeysa Koox ama dowlad ee waa shabakad madax banaan oo halku dhigeedu yahay "Wararka Sugan Ee Dunida iyo Dalka Hooyo"